हाम्रोमा बोल्ने धेरै, काम थोरै भयो : रुद्रकुमारी गुरुङ | eAdarsha.com
कास्कीको मादी गाउँपालिका थाकमा जन्मिएकी रुद्रकुमारी गुरुङ (मैना) सामाजिक एवं धार्मिक व्यक्तित्व हुन् । समाज सेवाका अतिरिक्त वित्तीय एवं व्यावसायिक संस्थामा उनको संलग्नता धेरै नेपाली महिलाका लागि मात्र नभई पुरुषका लागि समेत प्रेरणाकी स्रोत हुन् । हाल पोखरा– १० अन्नपूर्ण टोलमा बसोबास गर्दै आएकी गुरुङ बुद्धचोकस्थित पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष हुन् । यसैगरी कुँडहर आधारभूत विद्यालय, धर्मकाय बुद्ध मण्डला तथा व्यवस्थापन समिति र रोयल दिदीबहिनी किचन प्रालिमा समेत उनले अध्यक्षको भूमिकामा रहेकी छिन् ।
उनी हिमाली सांस्कृतिक परिवार, तमु प्रतिष्ठान नेपाल, अन्नपूर्ण टोल समाज, तमु धिं नेपाल, गुरुङ कलाकार संघ, गोर्खा कम्युनिटी पोखरा, सञ्जीवनी दिदीबहिनी समूह र कुंगा गुम्बाकी सल्लाहकार पनि हुन् । गोर्खा कम्युनिटी पोखराको गोर्खाली तारा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्की, तमुधिं नेपाल र सनातन धर्म सेवा समिति कास्की लगायत संस्थाबाट उनी सम्मानित भइसकेकी छिन् । २५६६ औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा बुद्धजयन्ती समारोह समिति कास्कीले पनि २ जेठमा उनलाई सम्मान गर्‍यो । आफूलाई लो प्रोफाइलमा राखेर निरन्तर सेवामा खटिन चाहने गुरुङसँग आदर्श समाजका रुपनारायण ढकालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
धेरै सामाजिक संघसंस्थामा संलग्न हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा कसरी प्राप्त भयो ?
पहिला मेरा बाबा कास्की जिल्ला उपसभापति हुनुहुन्थ्यो । उहाँ दुई पटक जिल्ला उपसभापति हुनुभयो । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानमा पनि लाग्नुभयो । २६ वर्षमा प्रधानपञ्च भएर गाउँ सेवामा लागिरहनु भयो । यसकारण समाज सेवामा लाग्ने प्रेरणा मैले बाबाबाटै पाएँ । त्यो बेला हामी सानै थियौं तर पनि उहाँको कामको प्रभाव म मा पर्‍यो ।
रोयल सहकारीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, आर्थिक क्षेत्रसँग कसरी जोडिन पुग्नुभयो ?
मानिसलाई जुनै पनि ठाउँमा अगाडि बढ्न अर्थ महत्वपूर्ण पाटो रहेछ । रोयल सहकारी कास्कीका ६ सयभन्दा बढी सहकारीमध्ये एक नम्बरको हो, गण्डकीका २५ सयभन्दा बढी सहकारीमध्ये हामी टप थ्रीमा पर्छौं । म यो आर्थिक पक्षसँग कसरी जोडिएँ भने अर्थ भनेको जीवनको अभिन्न एउटा अंग रहेछ । अर्थबिना जीवन चल्न नसक्ने भयो । यो सहकारी अहिले २१ वर्ष लाग्यो । मैले सुरुबाटै कार्यसमितिमा रहेर काम गर्दै आएकी छु । हामी साथी साथी मिलेर अनि हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनुभएका भीम गुरुङ सर र मुख्य प्रबन्धक रहनुभएका मीलन ढकाल सर मिलेर यो सहकारी स्थापना गरेका हौं । सहकारीमा लागेपछि आर्थिक गतिविधि थप बुझ्दै गइयो । पछि कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुँदै गएको असोजदेखि अध्यक्षको भूमिकामा रहेकी छु । हाम्रो टिम र कार्यसमिति राम्रो छ । सहकारीमा मात्र ४५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । रोयल सहकारीका दुलेगौंडा, लेखनाथ, मोहोरियामा शाखा पनि छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भयो भनिन्छ, सहकारीहरुको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
अहिले अलिकति संकट त पक्कै पनि होला । अहिले लोन माग्नेहरुको फाइल पनि धेरै आउँछन् । बैंकले ऋण रोकेको पनि सुन्नमा आएको छ । सबैले रोकेका त छैनन् होला । सबै सहकारीको त म भन्न सक्दिनँ तर बजारमा चर्चा आएजस्तो तरलता अभाव हाम्रोमा छैन । हामीले ऋण पनि दिइरहेका छौं । पहिलाजस्तो ठूलो कर्जा त दिएका छैनौं । सहकारी भनेकै सहकार्य गरेर सेवा गर्ने थलो हो । बैंक र सहकारीमा फरक पनि छ । हामी सदस्यलाई बढी सेवा दिन्छौं । ऋण माग्नेलाई हामीले सकेसम्म फर्काएका छैनौं ।
रोयल दिदीबहिनी किचनको अवधारणा कसरी आयो ?
रोयल किचनमा हामी यहाँ ९९ जना दिदीबहिनी जोडिएका छौं । सहकारीमा हामी समितिका साथीहरु बसेर छलफल गर्दा रोयलले अन्य क्षेत्रमा पनि फड्को मार्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । म उपाध्यक्ष हुँदा एउटा किचन बैंक्युट खोल्ने कुरा आएअनुसार यो खोलिएको हो । पछि दिदीबहिनीमात्र संलग्न भएर खोल्ने कुरा आयो । यहाँ खासगरी डाक्टर, सिंगापुर र बृटिस आर्मीमा सेवा गरेका व्यक्ति र समाजसेवामा हिँडेका साथीहरु बढी मात्रामा आबद्ध छौं । यसमा सुरुमा २१ जना कर्मचारीलाई हामीले रोजगारी पनि दिएका थियौं । कोभिडले केही प्रभाव पार्‍यो । अहिले पुनः राम्रो हुँदै गएको छ ।
राजनीतिसँग जोडिएको परिवारको सदस्य भएर पनि यो क्षेत्रमा किन लाग्नु भएन ?
पञ्चायत कालबाट नै मेरा बाबा राजनीतिमा जोडिनुभयो । परिवारमा ५ दाजुभाइ र दुई दिदीबहिनी हौं हामी । तर हामीचाहिं लाहुरे परिवेशतिर नै बढी ढल्कियौं । राजनीतिमा हाम्रो त्यति मन गएन । बाबा पनि शान्त खालको हुनुहुन्थ्यो । सायद बाबाले पनि हामीलाई आफ्नो किसिमले जिउन दिनुभयो । प्रेसर दिनुभएन । त्यो बेला हाम्रो त बच्चा दिमाग थियो । तिमीहरु राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि । तर उहाँ कसैलाई दबाब नदिने, प्रेसर नदिने, त्यस्तो खालका हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले परिवारमा हामी कोही पनि राजनीतिमा गएनौं । मेरो पनि बृटिस गोर्खा आर्मीसँग विवाह भयो । मेरो माइलो भाइ पनि बृटिस आर्मी र ठूलो दाइ इन्डियन आर्मीमा, साइलो भाइ अहिले बेल्जियममा र काइँलो भाइ सिंगापुर आर्मीमा जोडिन पुगे । कान्छी बहिनी पनि बृटिस आर्मीसँगै विवाह भयो र कान्छो भाइ अहिले पोर्चुगलमा परिवारसहित बस्छन् । खासमा हामी यस्तो परिवारको सदस्य हौं । घर धान्न, बच्चाहरुको स्याहार सुसारले गर्दा राजनीतिमा जाने समय पनि जुरेन । बरु अहिले राजनीतिमा जान अफर आएको थियो । यस्तो अफर योङ बेला आएको भए जान्थें होला । अब गएर के गर्ने ? मलाई यही समाजसेवा नै ठीक छ । यो क्षेत्र मलाई मन पर्छ । तर म भन्छु, जुनै ठाउँमा भए पनि राम्रो राजनीति हुनुपर्छ । राजनीति नराम्रो कुरा होइन । सबै जना एकै खालका त हुन्नन् तर अहिलेको चुनाव हेर्दा जनताहरुले धेरै कुरा बुझिसकेको जस्तो लाग्यो । म कुनै पार्टीमा पनि छैन । भोट हाल्दा राम्रा मानिस चुन्छु, चाहे जुनसुकै दलका हुन्, राम्रा मानिस रोजीरोजी भोट हाल्छु । जनताको काम गर्ने र जनताको मर्म बुझ्ने मानिस आउनुपर्छ, राजनीतिमा भन्ने लाग्छ ।
विदेशमा काम नगरी बसेर खाने मानिस देखिँदैनन्, हाम्रोमा धेरै समय भाषण र गफमा खेर फालिन्छ
लाहुरे परिवारको समेत सदस्यको नाताले जीवन कत्तिको संघर्षपूर्ण रहन पुग्यो ?
आजभोलि यसो सम्झिएर ल्याउँदा कस्तो लाग्छ भने, हुर्कियो, बढियो र विवाह गरेर गइयो अनि सन्तानहरु भए । मेरो एकछोरा र एक छोरी हुन् । जीवन त एक हिसाबले उनीहरुलाई हुर्काउने पढाउनेमै गयो भन्दा पनि हुन्छ । त्यसकारण म समाज सेवामा अलि पछि मात्र आइपुगें । जब मेरो बच्चाहरुले १२ कक्षाको पढाइ पूरा गरे, अनि म यता आएँ । उनीहरु हाल अमेरिका छन् । मेरो छोरालाई लाहुरे बनाउने मेरो सोच आएन । पढाउनु पर्छ भन्नेमा नै गयो । मेरो नानी (कमला) ले पनि अमेरिकाबाट सिए गरिन् । बाबु (सचिन) सफ्टवेयर इन्जिनियर हो । त्यही भएर पनि म राजनीतिमा गइनँ । ती दिन सम्झँदा समग्रमा जीवन संघर्षपूर्ण नै रहन पुग्यो ।
यहाँसँग विदेश भ्रमणको समेत राम्रै अनुभव छ, उता र यताको जीवन र विकासलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
विदेशमा कस्तो छ भने मानिस आफ्नो तरिकाले राम्रोसँग काम गरेर जिउन सक्छन् । यहाँ त हरेक ठाउँमा सोच्नुपर्ने । मलाई यता फसाइदिने हो कि उता फसाइदिने हो कि जस्तो । विदेशको राम्रो के भने, सरी र थ्यांक यु भन्ने । उनीहरुले सानो कुरामा थोरै सहयोगमा पनि मुखमा थ्यांक यु झुण्डिने । यहाँ अलिकति टच भए ओइ आँखा देखिनस् भन्छन् । त्यही भएर अलिकति अनुशासित हुन जरुरी छ हामी । हाम्रो देशमा धेरै समय भाषण र गफमा खेर फालिन्छ । उनीहरु रात दिन काम गर्छ । हाम्रोमा काम थोरै, बोल्ने धेरै भयो । थोरै बोलेर धेरै काम गर्नुपथ्र्यो । विकसित देशमा जुन काम गर्छु भन्छन्, त्यो काम गरेरै छाड्छन् । हाम्रोमा त्यो हुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ । हाम्रोमा समय धेरै खेर फाल्ने । हाम्रोमा क्यारेम खेलेको, चौतारोमा गफ गरेर बसेको निकै देखिन्छ । सबैले काम गरे त देश विकास भइहाल्थ्यो । घर अगाडि फोहोर थुप्रिएको हुन्छ । यहाँका मानिस उहाँ गएर शौचालय र भाँडा सफा गरेको देखिन्छ । त्यो काम यहाँ किन नगरेको जस्तो लाग्छ । विदेशमा काम नगरी बसेर खाने मानिस देखिँदैनन् । बाटोमा जेब्राक्रसममा समेत मानिस भागिरहेको देखिन्छन् । हाम्रोमा ढल्किँदै हिँडेको देखिन्छ । म युके, ब्रुनाई, हङकङ, बेल्जियम र अमेरिका गएँ । हङकङमा निकै बसें । श्रीमान् (मनिराज) सँग ब्रुनाई पनि बसें । युके बसें । अमेरिकामा बच्चाहरु र श्रीमान् भएका कारण त्यता आउने जाने गरिरहन्छु । यो आधारमा मैले मेरो अनुभव सुनाएकी हुँ ।
तमु धिं नेपालमा महासचिव भएर पनि काम गर्नुभयो । गुरुङ समुदायलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
गुरुङहरु वास्तवमा भन्ने हो भने धेरै इमानदार छन्, सज्जन पनि छन् । हाम्रो समुदायमा धेरै आर्मी ब्याकराउन्डको हुनुहुन्छ । त्यही भएर पनि धेरै इमानदार हुनुहुन्छ उहाँहरु र आफूलाई दिएको कामहरु एकदम जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुहुन्छ । हामीहरुले हाम्रा बाबु नानीहरुलाई पनि पढाउनुपर्छ । शिक्षाबिना अगाडि जान सकिन्न । बच्चाहरुलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ । सम्पत्ति भनेकै त्यही हो । हामीले धेरै सम्पत्ति जोडेर राखे पनि भोलि सन्तानले केही जानेको छैन भने केही गर्न सक्दैन । त्यही सम्पत्ति बेचेर खान्छ बरु । उसलाई अरु आइडिया हुन्न । पढाइदियो भने सम्पत्ति भनेको त्यही हो । अर्को कुरा पोखरामा गुरुङ समुदाय भएर पनि यो सहर सफा भएजस्तो लाग्छ । भित्री टोलहरु हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ । कतिपय टोलहरुमा बार नै छुट्याएर सफाई अभियान नै चलाइन्छ । यो अहिले अरुले पनि सिको गर्न थाले, यो निकै राम्रो हो ।
बुद्ध धर्मसँग पनि जोडिनुभएको छ, यस धर्मबाट कसरी प्रभावित हुनुभयो ?
म बौद्ध अर्घौं सदन रामघाटमा एक कार्यकाल कार्यसमितिमा बसेर पनि काम गरें । मेरो पहिलो समाजसेवा भनेको त्यहींबाट सुरु भएको हो । त्यहाँ ठूला धर्मगुरु आइरहनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको प्रवचन सुन्थें । त्यो बेलाको कमलो दिमागमा ती कुराहरु घुस्थे । अनि हिंसा गर्नुहुँदैन, कसैमाथि हत्या गर्नुहुँदैन । वचनले पनि बिराए, त्यो हत्यासरह भनेर गुरुले भन्नुहुन्थ्यो । वचनले पिराए पनि त्यो हत्यासरह भन्नुहुन्थ्यो । शान्त बस्न, आफूभन्दा ठूलालाई मान सम्मान गर्नुपर्छ, सानोलाई माया गर्नुपर्छ, झुटो बोल्नु हुँदैन र हिंसा गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरु मैले त्यहाँबाट प्राप्त गरें । त्यो बेला मेरो उमेर ३५/४० वर्ष हुँदो हो । घरबाट पनि मैले त्यही खाले शिक्षा पाएँ । हरेक धर्मले राम्रै कुरा सिकाउँछ । म अरु धर्मको पनि उत्तिकै सम्मान गर्न चाहन्छु ।
याङ्जाकोटका देवीजंग गुरुङ कास्कीको मादी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सोही…
राजनीतिकर्मी एवं समाजसेवी माधवप्रसाद बास्तोला (मधु) नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिका प्रवक्ता हुन् । प्रदेश समितिमा सदस्यको भूमिकामा रहेका उनको…
आदर्श समाज सम्वाददाता जेठ २९, २०७९
व्यवसायी ध्रुवबहादुर थापा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् । १७ वर्षको उमेरमा नै पोखरामा एउटा सामान्य रिकण्डिसन हाउसबाट…
क्याप्टेन भुवनसिं गुरुङ बौद्ध अर्घौं सदन पोखराका अध्यक्ष हुन् । समाजसेवा र बुद्ध धर्मको प्रचार तथा विकासमा उनले महत्वपूर्ण योगदान…